Yintoni a Lawyer kwaye Ntoni abaqondisi-mthetho Kwenza. Lokuthumela
A lawyer ufumana umntu olilungu educated kwi-mthetho kwaye uye wafumana kuyimfuneko ukuba iinkcukacha senzo umthetho. Abaqondisi-mthetho wenza imisebenzi emininzi, kuquka drafting kwaye unqwenela izivumelwano, ngokubonelela isemthethweni ingcebiso kwaye nto zabo abaxhasi ngaphakathi enkundleni. Zininzi iintlobo ezininzi ezonakeleyo abaqondisi-mthetho, ngamnye kubo specializing ngendlela ethile, kwiindawo umthetho. Ngokuqhelekileyo, ukuze umntu babe a lawyer, lowo kufuneka earn umthetho iqondo kwaye okokuba i-bar njalo. National Association kuba Isemthethweni Career Iingcali sichaza okokuba ngenxa kujike complex uhlobo umthetho yayo, lokukhula ukufikelela kuyo yonke indawo wobomi, indima lawyer ngu ukwazi.
Xa abantu kungena izivumelwano ingakumbi ishishini izivumelwano, baya ngokuqhelekileyo umsebenzi kunye abaqondisi-mthetho ukuphuhlisa isivumelwano oko kukuthi beneficial ukuba omabini amaqela kwaye enforceable phantsi komthetho.
Abaqondisi-mthetho nokunceda abantu ukubhala yabo iya kwaye itestamente
I-ugqityo ka-estate umthetho kwaye ukungakwazi ukuhlanganisa wabe omnye ke ubutyebi emva kokufa rhoqo necessitate iingcebiso i-experienced isemthethweni unxibelelane nomcebisi kwezezimali othembekileyo. Abaqondisi-mthetho kanjalo litigate kwi inkundla, mhlawumbi kuba nkqo ekukhuseleni ilungelo okanye prosecution. Baya kufumana kwaye umbuzo amangqina, ukuqokelela ubungqina kwaye anike iinyaniso ukuba sway a jury abaxhasayo abantu bamela. Abaqondisi-mthetho abo akhonza kulo prosecution kuba, ulwaphulo-mthetho iimeko rhoqo umsebenzi karhulumente
Abaqondisi-mthetho Induli Apartments - Apartments kwi-Elkridge